यी खबरहरूले सर्वसाधारणको दिमाग खराब गर्छ ? – korea pati
June 18, 2020 Korea patiLeaveaComment on यी खबरहरूले सर्वसाधारणको दिमाग खराब गर्छ ?
‘लकडाउनको बेला गाडी नचढ्दा पनि सांसदहरूले गाडी भाडाबापतको भत्ता लिए ।’
‘खाडीका मजदुरको पसिनामा मन्त्रीलाई विदेश भ्रमण र दूतावासलाई गाडी ।’‘खरिपाटी क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूले औषधि खाएकै थिएनन् । तर औषधि खर्च भन्दै सेनाले सरकारबाट ७३ लाख बढी भुक्तानी लिएको छ ।’
‘लकडाउनपछि राजस्व नउठेर खर्च धान्न मुस्किल भयो भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृहनगरमा भ्युटावर बनाउनका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।’बिहान एक कप तात्तातो चिया पनि पिउन नपाउँदै पत्रपत्रिका पल्टाउन थाल्नुहुन्छ । अनलाइन समाचार हेर्न थाल्नुहुन्छ । फेसबुकमा नजर डुलाउनुहुन्छ । तब तपाईंको आँखामाथि उल्लेखित समाचारमा पर्छ । यी खबरहरू पढिरहँदा तपाईंको मनस्थिति शान्त रहन्छ ? वा मनमा गुनासो, चिन्ता, तनावको भुँमरी मडारिन थाल्छ ?
भनिन्छ, बिहान निद्रा खुलेपछि शरीरमा ताजापन र स्फूर्ति आउनुपर्छ । रातभर मस्त विश्राम गरेपछि स्वाभाविक रुपमा बिहान शरीरले ताजापन अनुभव गर्छ । यही क्षणमा मनमा उमङ्ग र उत्साहको लहर पनि चल्छ ।तर जब–जब हामी देश र समाजको स्थितिबारे सरोकार राख्दै सञ्चारमाध्यममा आँखा डुलाउन थाल्छौं, विकृत घटना र विवरणले हाम्रो शान्ति भङ्ग गर्छ । हाम्रो उत्साह र ऊर्जामा शिथिलता ल्याउँछ ।सामाजिक विषयहरूमा सरोकार राख्ने मधुसुदन ढकाल यसै भन्छन् । उनी थप्छन्, ‘यस्ता खबरहरूले वैराग्य र वितृष्णा भाव जगाइदिन्छ ।’
यस किसिमका घटनाक्रम वा खबरहरू पढेपछि-सुनेपछि त्यसले हाम्रो मनस्थिति वा मानसिक स्थितिमा कुनै न कुनै किसिमको प्रभाव पर्ने मनोविद्हरू बताउँछन् । यसले हामीमा चिन्ता, तनाव पनि पैदा गर्न सक्छ । मनोविद् करुणा कुँवर भन्छिन्, ‘दिनहुँ एवं निरन्तर यस्तै किसिमका खबरहरू पढिरहँदा मान्छेमा चरम निराशा पैदा हुन्छ । चिन्ता, भय र रिसको स्तर बढाइदिन्छ । यसले मान्छेलाई तनावग्रस्त र दुःखी बनाउँछ ।’
अहिलेकै अवस्थालाई हेरौं । थुप्रै सर्वसाधारणले आयआर्जन गुमाएका छन् । कतिपयको रोजगारी गुमेको छ, कतिको लगानी डुबेको छ । रोग र भोकको भय छँदैछ । यस्तो अवस्थामा राज्यप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा बढ्छ । तर समाचार आउँछ, ‘सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्न थालेपछि श्रमिक आक्रोशित ।’ ‘महामारीको राहतमा भ्रष्टचार : कागजमा ३० किलो, हातमा ७ किलो ।’ ‘विपन्न देशमा सरकारी बिलासिताः गाडी र इन्धनमा पाँच वर्षमा ४६ अर्ब खर्च ।’ ‘राष्ट्रपति कार्यलयमा एक करोडको गलैँचा फेरिँदै ।’
सञ्चारमाध्याममा दिनहुँ आउने खासगरी सरकारको लाचारीसम्बन्धी खबरले सर्वसाधारणको चैन बिथोलिएको व्यवसायी मनोज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आम नागरिक राज्यको निर्देशनमा महिनौं आफ्नो घरमा चुपचाप बसेका छन्, तर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति मोजमस्तीमा रमाउँछन् । यस्तो बेथिति देख्दा रगत उम्लिन्छ नि ।’
अहिलेको संवेदनशील क्षणमा जसरी राज्य एवं सरकार नै मोजमस्ती र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेको छ, त्यसले सर्वसाधरणको आशा र भरोसा नै मारिदिएको किरणहाङ नेम्बाङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोरोना र लकडाउनका कारण त्यसै पनि हाम्रो मानसिक स्थिति कमजोर भएको छ । त्यसमाथि सरकारको अनेक काण्ड र भ्रष्टचारको खबरले डिप्रेसनकै अवस्थामा पुर्‍याउने डर भइसक्यो ।’
हरेक बिहान सरकारको यस्तो काण्ड, यति भ्रष्टाचार भयो, यति अनियमिता देखियो भन्ने खालको समाचार पढिरहँदा सर्वसाधारणमा मानसिक तनाव, चिन्ता र आक्रोश पैदा हुने मनोविद् करुणा कुँवरको भनाइ छ । यस किसिमको असर कुनस्तरमा वा कसरी बढ्दैछ भन्ने विषयमा ठोस अध्ययन वा सर्वेक्षण भने भएको छैन । तर यसले धेरैलाई चिन्ता र डिप्रेसनकै अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम देखिने उनको भनाइ छ ।
अहिले सरकार एवं राज्यको बेथितिबारे जे जस्ता खबरहरू सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका छन्, त्यसले युवापुस्ताको मनस्थितिलाई नराम्ररी बिगारिदिने मनोविद् कुँवरको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘भोलिका सम्भावना भनिएका युवाहरूमा आज नै चरम वितृष्णा पैदा हुने स्थिति देखिएको छ ।’
लाखौं नेपाली युवा रोजगारी गुमाएर गाउँ–घर फर्किएका छन् । घर फर्कने क्रममा कतिले ज्वरो र भोकको कारण ज्यान गुमाएका छन् । घर फर्किएकाहरुलाई संभावित संक्रमणबाट जोगाउन भन्दै क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । तर क्वारेन्टिनको हालत अरू खराब भएको खबरहरू छाउने गर्छ । एउटै कोठामा दर्जन व्यक्तिहरू कोचिएर बस्दा रोग फैलने भय बढेको छ । उनीहरूले सुविस्तासँग सुत्न र भरपेट खान नपाएको खबर छाइरहेको छ । यता सरकारले हिसाबकिताब देखाउँछ, ‘क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा अर्बौं खर्च भयो ।’ यस्तो खबर पढेर-सुनेर उनीहरूमा गुनासो र आक्रोश पलाउँदैन ?
विदेशमा हजारौं‌ नेपाली अलपत्र छन् । उनीहरूले रोजगारी त गुमाएका छन् नै खानेबस्ने मेलो पनि हराएको छ। एउटै कोठामा कोचिएर उनीहरू गुहार गरिरहेका छन्, ‘हामी बिजोग भयौं, उद्धार गरिदिनुहोला ।’
खाडी र मलेसिया गएका श्रमिकबाट उठाएको ६ अर्ब कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको छ । तर समाचार आउँछ, ‘विदेशमा रोजगारी गुमाएका मजदुरको उद्धारको नाममा दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल्दै सरकार ।’ ‘मजदुरको उद्धारभन्दा यतिको व्यापार ठूलो ! आपतमा परेका प्रवासीबाट दोब्बर भाडा लिएर हिमालयलाई १२ करोडको बिजनेस ।’
विदेशमा कष्टपूर्वक रात कटाइरहेका युवाहरू वा नेपालमा रहेका उनका परिवारहरूले यस्तो समाचार पढ्दा उनीहरूको मनस्थिति कति खलबलिन्छ होला ? यसले उनीहरूमा आक्रोश र तनाव पैदा गर्दैन ?
अहिले राज्य एवं सरकारको लाचारी र भ्रष्ट प्रणालीले समाजलाई नै तनावग्रस्त बनाउँदै लगेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
एनसेलको डेटा र भ्वाइस प्याकहरू लिन अझै सजिलो
उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको सिमामा सैनिक पठाउने:
दृढता र इच्छाशक्तिबाट रोगसँग लड्न सकिन्छ
August 12, 2020 Korea pati
पशुपंक्षी झै के हामी वर्तमानमा रमाउन सक्छौं ?